Layma's World: August 2007
“ငါ” ဖွဖွလေးတွေးကြည့်တယ် ....၊
HTML တွေကို edit လုပ်နေကြမယ်.......၊
ကဗျာတွေသီ စာတွေဆီလို့ ...
လှလှပပလေး ရေးဖွဲ့ နေကြမယ် ......၊
ခရီးသွားမှတ်တမ်းလေးတစ်ခု .... ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်....
Blog ဆိုတာ ......ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်မယ် .....
ပြန်အထွက်မှာ သံယောဇဉ်တွေနဲ့လေးနေမှာစိုးတယ်......၊
သူတို့ အတွေးတွေ ၀င်လာတယ်....
သူတို့ အတွေးတွေနဲ့ငါနွေးထွေးခဲ့ပါတယ်....
ငါ့အရေးတွေနဲ့သူတို့ အေးခဲသွားမှာစိုးတယ်.....၊
Blog ကဗျာနဲ့နုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်.....
Blogsphere ကြီး အဓွန့် ရှည်လို့ ....
August 31 တွေ မှန်မှန်လည်ပတ်နေပါစေ.......။ ။
ကိုဘုရင့်နောင်Blog day အမှတ်တရ တစ်ခုခု ရေးပေးပါရှင်....။
Posted by Layma at 9:30 PM6comments Links to this post
မောင်လေးရေ … ထတော့လေ … ထပါတော့ … အိပ်ပျော်မနေပါနဲ့ တော့ … ၊ ညီမလေးရေ … ထပါတော့ … အိပ်ပျော်ချင်ယောင် ဆောင်မနေပါနဲ့ တော့ … ၊ ရောင်နီလာနေပြီ … အချိန်ကျနေပြီ … မောင်လေးတို့… ညီမလေးတို့ထသင့်ပြီ …၊ ရောင်နီလာလို့ထရမှာလား… မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ နိုးထလို့ … ရောင်နီလာမှာလား …ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ... ရောင်နီနဲ့...မင်းတို့ နိုးထချင်း …ဒွန်တွဲနေသင့်တယ် မဟုတ်လားဟင်...။
“တစ်ကျော့ နှစ်ကျော့ … တေးကိုသီ … ငှက်ကျားနှုတ်ပလီ …”
ကြက်ဖတွန်လို့...ငှက်ကလေးတွေ တေးသီလို့ ... ကျီကျီကျာကျာနဲ့ ... မင်းတို့ ကို နှိုးနေကြပြီလေ …၊ အိပ်ပျော်နေကြတုန်းလား …၊ ငှက်ကျားလေး တေးပလီနေရတာ တစ်ခေါက်မကတော့ဘူးလေ… အခါခါကျော့ နေရရှာတယ်… ။
“ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ် … မိရယ်ဖရယ် … ဘ၀၀ယ် ... စုံစုံညီညီ …”
တို့ တွေငယ်ငယ်တုန်းက တို့ တွေအိမ်မှာ အဖေရယ်အမေရယ် တို့ မောင်နှမတွေရယ် … ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စုံစုံညီညီနဲ့ ဝိုင်းဖွဲ့ စားခဲ့တဲ့ ထမင်းဝိုင်းလေးကို တမ်းတမိတယ်… အဝေးရောက်နေတဲ့ … မောင်လေး…ညီမလေးတွေရယ် …၊ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ … ပြသနာတွေကို အတူဖြေရှင်း … တမိုးတည်းအောက်မှာ တရေတည်းသောက်ခဲ့ကြတာကို မှတ်မိသေးရဲ့လား … ၊ တို့ အိမ်ကို ရန်စလာတဲ့သူတွေကို အဖေကဓါးဆွဲလို့… မောင်လေးကတုတ်ကိုင်ပြီး ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတော့ အမေနဲ့တို့ ညီမတွေက နောက်ကနေခါးထောက်လို့အားပေးခဲ့ကြတော့ သူတို့ ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်လေ …၊ အခုတော့ တို့ မောင်နှမတွေ တမြေဆီဝေး မင်းတို့ တွေက အဝေးကြီးမှာဆိုတော့ အဖေတို့ အမေတို့ရဲ့အမွေ ...တို့ အိမ်လေးယိုင်နဲ့အိုဟောင်းလို့ရောင်းစားခံရတော့မယ် ….၊ အမြန်ပြန်လာပါတော့ … မောင်လေး … ညီမလေးတို့ ရယ် … ။
“ ကျွန်တော်တို့ … ကျွန်မတို့ လေ… ကျွန်တော်တို့ … ကျွန်မတို့ လေ …ချစ်လေသူကို ချစ်လေသူကို …ကိုယ်ကတဖန် ပြန်လည်ချစ်တတ်ကြပါစေသည်…ဘ၀တေးဆိုရင် ခဏလေး...မဆိုချင်…ကျော့ကျော့လွင်မှ အသွင်လှပါလေမည် … ”
Posted by Layma at 8:00 PM9comments Links to this post
Labels:2in 1 style, Heart touching songs, That's what I wanna say
မောင်တော်ဘုရားဟာ … ရွှေအိမ်သည်ရဲ့ ဖခင်အရင်းပါ … ၊ ထွက်ပြီးသားဆင်စွယ် ပြန်ဝင်ရိုးထုံးစံ မရှိသလို ... မင်းတို့ ရဲ့ စကားဟာလဲ .... ပြင်ရိုးထုံးစံ မရှိဘူးဆိုတာ…. နှမတော်…. နားလည်ပါတယ်….မောင်တော်ရယ်….. ၊ ဒါပေမယ့် ဒီစကားကိုတော့ ပြင်လိုက်ပါ … မောင်တော်ရယ်… ၊ ပြင်ပေးပါ…. မောင်တော်မင်းမြတ်ရယ်…. ၊ ရွှေအိမ်သည်ရဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ …. အပယ်ရတနာရဲ့ ခင်ပွန်းတစ်ယောက်အနေနဲ့…. ဇနီး နဲ့သမီးကို ငဲ့ညှာသနားတဲ့အနေနဲ့ .... ပြင်ပေးတော်မူလှည့်ပါဘုရား ....၊ ဒီအမိန့် တော်ကိုဖြင့် နှမတော် မကြားခဲ့ဘူးလို့ …မှတ်ယူလိုက်ပါရစေ……မောင်တော်ရယ်…..။ မောင်တော်မင်းမြတ်ကို နှမတော် အမြဲ ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာ .... မောင်တော်သိပါတယ် ... ။
ပသီမင်းသား ပဋိက္ခရား နဲ့သမီးတော်..... မေတ္တာမျှစဉ်အခါက .... မောင်တော်စေခိုင်းစရာမလိုဘဲ ...ကျန်စစ်မင်းကြီးရဲ့ မိဖုရားခေါင်ကြီး အနေနဲ့ .....၁၈ နှစ်အရွယ် ရွှေအိမ်သည် ကို ....မိန်းမသားချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကို ..... ဘေးချိတ်ပြီး ....နိုင်နင်းစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့တာကို .... မောင်တော်အသိပါ ....။ မစားနိုင်မသောက်နိုင် ... တမှိုင်မှိုင်တတွေတွေနဲ့... သလွန်ပေါ်ခွေနေရာက ...လန်းဆန်းစပြုကာစ သမီးငယ်လေးကို ....“စောယွန်း”နဲ့လက်ဆက်စေမယ်ဆိုတာကတော့ ....နှိပ်စက်ရာမကျပေဘူးလား ... ဘုရာ့ .....။ “စောယွန်း” ဆိုတာ ခြေတစ်ဖက် မသန်ဘူးလေ.....ဘုရာ့ ... ၊ နှမတော်မှာ သူတစ်ပါးရဲ့ အားနည်းချက်ကို ....ကဲ့ရဲ့ နှိမ့်ချလိုတဲ့ စိတ်မရှိပါဘူး ...ဒါပေမယ့် ... တပင်တိုင်မြနန်းမှာ ... ယင်ဖိုတောင်မသန်းစေဘဲ စံစားစေခဲ့တဲ့ .... ၊ ဖခင်ရဲ့ထက်မြက်မှု ... မိခင်ရဲ့ သိမ်မွေ့ မှုတွေ နဲ့.... ရွှေအဆင်းလို တင့်တယ်လှတဲ့ .... သမီးတော်လေးကို... လက်ရုံးရည် ....နှလုံးရည် ပြည့်ဝတဲ့ ... သူရဲကောင်းနဲ့လက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ ... မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အတ္တပါ ... မောင်တော်ရယ် ....။ နောက်ထပ်စဉ်းစားစရာက.... “မျိုးစေ့မမှန် ပင်မသန်” တဲ့ .... ။ “စောယွန်း” ရဲ့ ဖခင်က “စောလူးမင်း” လေ... ဘုရာ့ .....၊ အရည်အချင်း တစ်စက်မှ မရှိတဲ့မင်း .... မောင်တော့်အပေါ် အမြဲ မကောင်းကြံခဲ့တဲ့မင်း ..... ရန်သူ့ လက်တွင်းက ကယ်ထုတ်လာတာတောင် .... မယုံမကြည်နဲ့ .... “ ကျန်စစ်သား ငါ့ကိုခိုးပါတယ် ” လို့ ..... အော်ခဲ့လို့မောင်တော်တောင် အသက်လုပြီး ပြန်ပြေးခဲ့ရတယ် မဟုတ်လား .....။ ဒီလိုဆိုတော့ “စောယွန်း” ဟာ အနော်ရထာမင်းမြတ်ရဲ့ မြေးမို့ .... အင်မတန်ကောင်းတဲ့ မျိုးစေ့ပါလို့ ..... မောင်တော်က နှမကို ဖြောင်းဖျပေဦးမယ် ... ။ အဖေနဲ့အဖိုး ဘယ်သူ့ သွေးကပိုနီးမလဲ လို့ သာ .... နှမတော် မေးပါရစေတော့ ...။ မိန်းမဆိုတာ ယောက်ျားတွေကို .....ပံ့ပိုးပေးဖို့လူဖြစ်လာရတာမဟုတ်ပေမယ့်... ဇနီးဆိုတာကတော့ သူ့ ဘ၀ကို .... ခင်ပွန်းအတွက်လို့.... မှတ်ယူထားကြသူများ ဖြစ်လေတော့ .... ရတနာတို့သားအမိမှာ .... မောင်တော် စီမံတာ နာခံကြရမှာပါ .... ။ ပြည့်ရှင်မင်းရဲ့ အမိန့် ကို .... ကလန်ကဆန် မလုပ် ၀ံ့သလို ... အမြော်အမြင်ကြီးတဲ့ .... ခင်ပွန်းရဲ့ အစီအမံကို ... ဇနီးကောင်းပီသစွာနဲ့.... ခေါင်းညိတ်လက်ခံပါ့မယ် ... ဘုရာ့ .....။ တစ်ခုတော့ ဖွင့်ဟလိုက်ပါရစေ .... ကျန်စစ်မင်းရဲ့ မိဖုရားခေါင်ကြီး အနေနဲ့.... မောင်တော်ရဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးမားမှုကို .... ထောက်ခံ အားပေး ....ဂုဏ်ယူ ကျေနပ်နိုင်ပေမယ့် ..... ရွှေအိမ်သည်ရဲ့ မိခင် “အပယ်ရတနာ” အနေနဲ့ .... မောင်ကြီးကျန်စစ်ရဲ့ ဇနီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ တော့ .... မောင်ဘုရားရဲ့ စီမံမှုကို .... လုံးဝ .... မကျေနပ်ပါဘူး ...ဘုရာ့ ....။ ။
မှတ်ချက် ။ ။ အဖြူရောင်အတွေး ....မိန်းမသားအတွေးသက်သက်သာ ...။
Posted by Layma at 3:30 PM6comments Links to this post
2 in 1 style - ကဗျာ တလှည့် စာတလှည့် ရေးသားထားသော စာများ......၊
Analysis - လေ့လာဆန်းစစ်မှုဆိုင်ရာ စာများ ......၊
Architecture - ဗိသုကာ ပညာရပ်နှင့် ဆက်နွယ်နေသော စာများ......၊
Cartoons - ကလေးများကြိုက်သော .... လေးမ ကြိုက်သော စာရုပ်စုံများ .....၊
Flower - ပန်းစကား (သို့ ) ပန်းများနှင့် စကားပြောကြည့်ခြင်း ......၊
Link to the past - အတိတ်သို့ချိတ်ဆက်ခြင်း ....(သို့ ) တမ်းတခြင်း ......၊
News - သတင်း .....၊
Poem - ကဗျာ......၊
Preface - အမှာစကား .....၊
Seasonal Post - ရာသီစာ .....၊
Tag - ခင်မင်မှုဖြင့် သူတို့ တက် သမျှ.....၊
That's what I wanna say - ပြောချင်သော စကားများ .....၊
Thinking from History - ရာဇ၀င်ထဲမှ အတွေးစများ (သို့ ) သမိုင်းကပေးသောအတွေးများ.....၊
Thinkings from novels - ၀တ္ထုဖတ်ပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့သော အတွေးစများ .....၊
Thinkings from story - အတွေးပေးသော ပုံပြင်များ .....၊
Wondering - ဟိုတွေး .....ဒီတွေး ....ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေသောအခါ ရေးမိသော စာများ ....၊
ဖော်ပြပါအတိုင်း ကဏ္ဍများခွဲ၍ ရေးသားခဲ့သည် .....။ .....balar....balar...balar....။
ရှင်းလင်းပွဲကို သန်းခေါင်ကျော်အချိန်တွင် လက်ခုပ်တီး၍ နိဂုံးချုပ်ပြီးသကာလ ကြွရောက်လာကြသော ပြည်တွင်းပြည်ပမှ blogger များသည် “လေးမ” ခင်းကျင်းပြသထားသော ဓါတ်ပုံများနှင့် မှတ်တမ်းများကို ၀တ်ကျေတန်းကျေ ကြည့်ရှု၍ ပြန်သွားကြပါသည် .....။ ။
P.s . နောက်တခါအပြောင်းအလဲ လုပ်ဖြစ်ခဲ့လျှင်လဲ ယခုကဲ့သို့ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ချင်လုပ်မယ် .... မလုပ်ချင် မလုပ်ဘူး ဟု .... “လေးမ” မှ တိကျစွာပြောကြားသွားပါသည် ....။
Posted by Layma at 12:24 AM5comments Links to this post
Posted by Layma at 6:43 PM2comments Links to this post
လမ်းမပေါ် ပြေးထွက်ချင်လိုက်တာ... ။
စိတ်ညစ်ရင် လမ်းလျှောက်ထွက်လိုက်ရတာ အကောင်းဆုံးပဲ... လမ်းပေါ်မှာ ကားမပါဘဲ လျှောက်သွားရင်း လေကောင်းလေသန့် တွေ တ၀ကြီးရှူသွင်းရင်း စိတ်ညစ်စရာတွေကို တ၀ကြီးပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်ရရင် ပေါ့သွားမှာပဲ.....။ လူးလာလှုပ်ရှား ရုန်းကန်နေကြရတဲ့ လမ်းပေါ်က ဘ၀တွေကိုတွေ့ ရင် ကိုယ့်ဒုက္ခက သေးသေးလေး ဖြစ်သွားကောင်း ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ... ပျော်စရာမြင်ကွင်းတွေကို တွေ့ ရင်လဲ အပျော်တွေ ကူးစက်သွားနိုင်တယ် ... သတိထားကြည့်တတ်ရင် ရယ်မောစရာ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကိုလဲ တွေ့ ရမယ်... သေချာတာ တစ်ခုကတော့ လမ်းများများလျှောက်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ မောမောနဲ့အိပ်ပျော်သွားနိုင်တယ် ... ။ အတွေးတွေ နှိပ်စက်ခွင့် မရတော့ဘူး ...။ ( လမ်းလျှောက်ထွက်မယ်ဆိုရင် အနွေးအကျီင်္လေး ဆောင်သွားဖို့ တော့ မမေ့နဲ့ နော် .... )
ကာတွန်းတွေ တဲ့ ...
စာဖတ်ခြင်းသည် ကောင်းသောအလေ့အကျင့်ဖြစ်လို့ဒီနည်းနဲ့စိတ်ညစ်တာသက်သာအောင် လုပ်တာလဲ ကောင်းတာပဲ.....။ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ကာတွန်းဖတ်ပြီး ရယ်မောလိုက်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ ပေါ့သွားနိုင်တယ်.... ခက်တာက ကာတွန်းတိုင်းသည် ဟာသမဟုတ်.....ရယ်စရာမကောင်း....။ Online ရရင် Blog တွေလိုက်ဖတ်နေရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်....။ အပြင်မှာ နာမည်ရနေတဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့ အရေးတွေ.... အတွေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ချက်ချင်းကောက်ချက်ဆွဲ..... ဆွေးနွေးလို့မဲပေးလို့မရဘူး.....ရခဲ့ရင်တောင် သူတို့ စာတွေကို
ဝေဖန်သုံးသပ်ဖို့တော်ရုံလူမ၀ံ့ရဲပါဘူး....။ သူတို့ဘယ်လိုပြန်ဆွေးနွေးမလဲ ကိုယ်သိဖို့ ခက်တယ်.....။ Blog မှာ ဒီအခွင့်အရေးတွေ အကုန်ရတယ်.....။ ကိုယ်ကြိုက်ရာကိုယ်ရေး..... ထင်သလို ၀င်ဆွေးနွေးသွားလို့ ရတယ်..... အတွေးတွေ ဖလှယ်လို့ ရတယ်....။ Blogger ကျင့်
၀တ်ဆိုတာကြီး လူတွင်ကျယ် မဖြစ်လာသေးခင်အထိတော့ အတွေးတွေ.... အရေးတွေ လွတ်လပ်နေဦးမှာပဲ.....။ အဲဒီဟာကြီး လူရာမ၀င်ပါစေနဲ့ ဦးလို့စိတ်ပုတ်စွာ ဆုတောင်းရမှာလား.....။ စိတ်ဝင်စားရင် cbox တွေလိုက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ဦး.....။ မမြင်ဖူး.... မတွေ့ ဖူးကြပါပဲ ချစ်ခင်ရင်းနှီးပျော်ရွှင်စွာ နောက်ပြောင်နှုတ်ဆက်နေကြတဲ့ မောင်နှမတွေနဲ့ဆဲဆိုရန်စ အငြင်းပွားနေကြတဲ့ လူတစ်စုကိုလဲ တွေ့ ရမယ်.....။ ကိုယ်က ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်......၊ လိုက်ဖတ်ပြီး.....ထိုင်ရယ်နေရုံပဲ.....။
music တွေနဲ့ နေကြည့်လိုက်တယ်တဲ့.....
စိတ်ညစ်တဲ့အခါ သီချင်းတွေ နားထောင်မလား..... ဆိုမလား....ကြိုက်တာသာလုပ်.....။ သီချင်းဆိုတာ အပေါက်တစ်ပေါက်ပဲ.... ၀င်ပေါက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်..... ထွက်ပေါက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်.....။ သီချင်းတွေထဲမှာ ကိုယ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ စာသားတွေ အများကြီးရှိနေနိုင်တယ်.....။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ထိတဲ့သီချင်းတွေ လိုက်အော်လိုက်ရတာ သိပ်အရသာရှိတယ်.....။ နားထောင်ပါ..... ဆိုပါ..... စိတ်နဲ့ရင်ဘတ်ကို အကျယ်ကြီးဖွင့်ထားလိုက်ပါ.....။ song source ကိုတော့တိုးတိုးဖွင့်နော်.... ဘေးလူတွေ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကုန်မယ်....။
“လေးမ” စိတ်ညစ်ရင်လား......အင်း..... သန့် ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တယ်.....။ အခန်းထဲမှာ ပွနေတာတွေ ရှင်းတယ်..... ဖုန်သုတ်တယ်.... ကြမ်းတိုက်တယ်..... ရေချိုးခန်းဆေးတယ်..... အားသွန်ခွန်စိုက် အသားကုန်ရှင်းလိုက်တယ်.....။ သိပ်ငိုချင်လာရင် အ၀တ်တွေ တပုံကြီးလျှော်ရင်း ငိုချလိုက်တယ်.....။ ရေချိုးခန်းကြွေပြားတွေ ပြောင်လက်နေအောင်..... လက်တွေပွန်းအောင် တိုက်ရင်း သီချင်းတွေအော်ဆိုလိုက်တယ်.....။ အ၀တ်ဗီရိုရှင်းရင်း ညစ်နေတာတွေ ရှင်းထုတ်လိုက်တယ်.... သနပ်ခါးကျောက်ပြင်ကို သနပ်ခါးစတွေ ပြောင်စင်သွားအောင်တိုက်ချွတ်တယ်.....။ ခေါင်းဖီးတွေဆေး.... ခေါင်းစည်းတွေလျှော်..... လုပ်စရာတွေ ကုန်လို့ မှ စိတ်မပြေသေးရင် ခေါင်းလျှော်ရေချိုးပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့အိပ်ရာပေါ်တက်.... စောင်ခြုံပြီး အိပ်နေလိုက်တယ်.....။
စိတ်ညစ်ရင် ကဗျာရေး.... စာရေး.... အတွေးတွေ မျှဝေပေးလို့ ရတယ်.....။ အရေးတွေ ကောင်းစရာမလိုဘူး.... အတွေးတွေလှစရာမလိုဘူး..... အေးအေးဆေးဆေး ဒိုင်ယာရီရေးသလို ရေးချင်တာတွေသာရေး.... ဘာမှတွေးမနေနဲ့ .... စိတ်ရှိသလိုသာရေး..... မကျေနပ်လို့အော်သွားတဲ့သူရှိရင်လဲ ငြိမ်ခံနေလိုက်.......။ မငြိမ်ချင်ရင် ပြန်အော်လိုက်....။ blog မှာ ပျော်စရာကြီး..... သိလား..... Blog မရှိသေးရင် လုပ်လိုက်တော့....သူငယ်ချင်း ....။ ။
Posted by Layma at 11:00 PM 8 comments Links to this post
Labels:2in 1 style, Poem, Seasonal Post, That's what I wanna say
Posted by Layma at 3:18 PM5comments Links to this post
Labels: Analysis, Seasonal Post
မှေးစက်လို့အိပ်ကုန်ကြပြီလား….။
Posted by Layma at 12:42 AM6comments Links to this post
အဖေလုပ်တဲ့သူရဲ့ တာဝန်မယူမှုကို … အပြစ်မဆိုခဲ့ပေမဲ့ … သားဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်မိတဲ့ အချိန်မှာ ဒါဟာလက်စားချေတာပါလို့… အစွပ်စွဲခံခဲ့ရတဲ့ … ၂ ခါရှုံး မိန်းမတစ်ဦး….. ၊ အဖေကို ချစ်သော …. ဂီတကိုချစ်သော…. ထိုမိန်းမကိုလဲ ချစ်သော…. သို့ သော် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရင်ဆိုင်ရန် သတ္တိ မရှိသော....အုပ်စိုးဟူသော အဆိုတော်တစ်ဦး တို့ ကို … ဂီတနှင့် ရောမွှေရေးဖွဲ့ ထားသော ၀တ္ထု ဖြစ်သည်….။
Posted by Layma at 8:14 PM4comments Links to this post
Posted by Layma at 5:50 PM3comments Links to this post
Posted by Layma at 5:32 PM 8 comments Links to this post
Posted by Layma at 8:56 PM 21 comments Links to this post
၉ တန်းတုန်းကထင်သည်…. အင်္ဂလိပ်ဖတ်စာအုပ်ထဲက "The Light" ဆိုတဲ့ ကဗျာလေး သင်ရတော့ မတောက်တခေါက် ဘာသာပြန်ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်….( မူရင်း မမှတ်မိတော့လို့သိရင်ပြောကြပါ )
နေ့ မှာ နေမင်း.....တကိုယ်တည်း...“သာ”...
ကမ္ဘာကြီး အလင်းရောင် မဲ့လိမ့်မည်....။
ဘ၀သည် ... အဓိပ္ပါယ်မဲ့လိမ့်မည်...။ ”
၁၅နှစ်သမီး “လေးမ” ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာကို ၂၈ နှစ်ပြည့်တော့မယ့် “လေးမ” က modify လိုက်တဲ့အခါ......
“ည” နတ်သမီးရဲ့ အပါးမှာ...
ကြယ်စင်တွေ ခစားလို့ ...
ကြယ်တပွင့် ကြွေသွားလို့ ....
“နေ့ ” မင်းသမီးနံဘေးမှာတော့....
အလင်းရောင်တွေ ကျဲလို့ ပါလား....၊
ချုပ်ငြိမ်းလို့ရုံးဆင်းတဲ့အခါ.....
“နေ့ ” ဟာ “ည ” ဖြစ်သွားခဲ့တယ်.....။
“စိတ်” ဆိုတဲ့ ထိုအရာမှာ....
အတွေးတစ်ခု လွတ်ကျလို့ .....
ဘ၀က .... သိပ်တော့ မပြောင်းလဲပါဘူး....။
မူယာမာယာ မများနဲ့ ....
သွေးတွေ မဲနေလိမ့်မယ်......။ ။
When love is done.--
Thank you so much ko kreator for this original poem....
Posted by Layma at 3:50 PM6comments Links to this post
Posted by Layma at 8:00 PM2comments Links to this post
ကျွန်မက ယောက်ျားကို သိပ်ချစ်တာ... အဲဒါကြောင့် စိတ်မချဘူး.... ကျွန်မက အိမ်ထောင်ရေးမှာ ရာထူးတက်မှာ သိပ်ကြောက်တာ...။ ကျွန်မကို ယောက်ျားက ပြောတယ်.... “သံသယတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ မိန်းမ” တဲ့..... “တနေ့ အဲဒီစိတ်နဲ့မင်းရူးလိမ့်မယ်” တဲ့......။ အချိန်တန်လို့သူပြန်မရောက် လာသေးဘူးဆိုရင် သူ့ ဖုန်းကို မရမက လိုက်ဆက်တတ်လို့တခါတရံ ယောက်ျားက ဖုန်းပိတ်ထားတတ်တယ်..... အဲလိုနေ့ မျိုးဆို ရန်ပွဲ....ငိုပွဲပဲ.....။ ခုလဲ ည ၈ နာရီထိုးနေပြီ..... ထမင်းစားစောင့်နေတာ ပြန်မလာသေးဘူး....။ ဖုန်းဆက်မိမှာစိုးလို့လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားပေမယ့် အချိန်တန်တော့ ဒီနံပါတ်တွေကိုပဲ နှိပ်မိသွားပြန်တယ်..... “လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော.......” ဟင်....ဘယ်ကမိန်းမလဲ....ယောက်ျားဖုန်းကို ဒီမိန်းမက ဘာလို့ ကိုင်ရတာလဲ.... “ဟိတ်... ညည်းဘယ်သူလဲ...” ဒီအသံ....ကြားဖူးပါတယ်.....အော်...ဒါ ဆက်သွယ်ရေးက သွင်းထားတဲ့ အသံပဲ..... ဟူး....ဖုန်းချလိုက်တယ်.....။ အင်...ဒါနဲ့ နေပါဦး..... “ဧရိယာပြင်ပရောက်ရှိနေပါသဖြင့်......”
လို့ ဖြေသွားတယ် .....။ ဧရိယာပြင်ပဆိုတာ ဘယ်လိုနေရာမျိုးပါလိမ့်..... ဘုရား....ဘုရား....။ သူ့ အတွင်းရေး မှူးမလေးဆီက ဖုန်းလာတိုင်း ....ကျွန်မရဲ့ profession ကိုစွန့် ပြီး အတွင်းရေးမှူးသင်တန်းပဲ ပြေးတက်ရတော့ မလိုလို ....... စာရင်းအင်းတွေပဲ ပြေးသင်ရတော့ မလိုလို.....ကျွန်မ ကယောင်ချောက်ချား ဖြစ်ဖြစ် သွားတတ်ပါတယ်.....။ ကျွန်မ သူ့ အတွင်းရေးမှူးလုပ်မယ်လို့အရေးဆိုဖူးပါတယ်....သူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ “ မင်းကတော့ စက်ကတ်ကြေးပဲ လုပ်လို့ ရမယ်....” တဲ့.....။ ကျွန်မကို လူတွေက မကြားတကြားပြောကြတယ်..... “ အဲဒီမိန်းမက သူ့ ယောက်ျား ကို ချစ်လွန်းလို့ရူးနေတာ..... နေရာတကာလိုက်ကြပ်လွန်းလို့ဘယ်နေ့ ထားခဲ့ခံရမလဲ မသိဘူး.... အဲဒီနေ့ ကတော့ အဲဒီမိန်းမ သွက်သွက်ခါ သွားမယ့်နေ့ ပဲ....” တဲ့.....။ ဟုတ်လား.... ကျွန်မ ရူးနေတာလား....။
လေးမ...ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး blog မှာစာတွေရေးနေတယ်.... မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့နောက်လို့ပြောင်လို့ ..... ပျော်လို့ ....ပါးလို့ .....။ အဲဒါကို ကြည့်မရဖြစ်ပြီး မျက်စိစပါးမွှေးစူးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်....။ သူဘယ်သူလဲသိလား.... လေးမ ရဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်ကြီးပေါ့....(အချင်းချင်းကပ်ပြီး မနာလိုဖြစ်နေတာလေ )...။ ဒီနေ့ တော့ သူ.... လေးမကို ပေါ်တင်ချဲပါတယ်.....။
“လေးမ..... နင့်ကိုယ်နင် I'm the Queen ဆိုပြီးတော့ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်နေတယ်ပေါ့..... ဘာတွေလျှောက်ရေးမှန်းမသိဘူး..... ပေါကြောင်ကြောင်နဲ့ ..... ကဗျာတွေလဲပါရဲ့.... ရှက်ဖူးလား.... အတိတ်အတိတ်ဆိုပြီး ပြန်ပြန်ရေးနေတာ တရား လက်လွတ်လှချည်လား..... ဟင်....စိတ်ကို present မှာတည့်တည့်ထားရမယ်လို့ဘုန်းဘုန်းဟောထားတယ်လေ..... ငါတော့ နင့်ကိုစိတ်ကုန်တယ်.... ဟိုတနေ့ကလဲ ... မိန်းမဆိုတာ သနပ်ခါးပန်းနဲ့တူသတဲ့..... တခါမှ မကြားဖူးဘူး.... မိန်းခလေးတွေကို စပယ်...ခရေ...နှင်းဆီ နဲ့ ပဲ တင်စားလာကြတာ..... နင့်ကျမှ ထူးထူးဆန်းဆန်း..... ။ အဲလိုသာ ပြောကြကြေးဆိုရင်..... ငါသာ ယောက်ျားလေးဆိုရင် မိန်းမတွေဟာ “ဘိန်းပန်း” နဲ့ တူတယ်လို့ရေးမှာပဲ..... ရေးလေ.... အဲလိုပြန်ရေးစမ်း.... အဲ...ဟုတ်ပေါင်... နင့်ကို စာမရေးအောင် တားနေပါတယ်ဆိုမှ မြှောက်ပေးသလို ဖြစ်သွားပြန်ပြီ.....။ တော်ပြီ......တော်ပြီ.... နင်လုပ်စရာအလုပ်တွေ ပုံနေပြီ..... ဘာမှ လျှောက်ရေးမနေနဲ့ ... သိတာ....တတ်တာလဲ ဟုတ်တိပတ်တိ မရှိဘဲနဲ့အာချောင် မနေနဲ့ ......။ ကဲ.... ငါအခု သခွတ်ပင်မှာ နတ်သဘင် ညီလာခံတက်ရဦးမယ်..... ညီလာခံမှာ ဒီပြသနာကို သိကြားမင်းကို တင်ပြရမယ်......။ နင်အိမ်မှာ အိပ်နေနော်..... နင်နိုးနေရင် ငါစိတ်လေးလွန်းလို့ ....။” တချိန်လုံး ငြိမ်ခံနေခဲ့တဲ့ လေးမ ဒီတခါတော့ အပီပဲဆိုပြီး ပြန်တွယ်လိုက်တယ်...... “ဟွန်း....ကိုယ်စောင့်နတ်ကလဲ.... တလွဲကြီးပြောနေတယ်.... သိကြားပြည်မှာ ကသစ်ပင် ပဲရှိတဲ့ဟာကို..... သခွတ်ပင်က အသူရာ ပြည်မှာ ပေါက်တာကြီးကို.....” “ ဟဲ့.... နေရာပြောင်းထားတာ.... နေရာပြောင်းထားတာ.... မသိရင်မပြောနဲ့ .... တခွန်းမှကို ၀င်မပြောနဲ့ ....တော်ပြီ....နောက်ကျနေပြီ.... ငြိမ်ငြိမ်နေ....ကြားလား....”
“ဟုတ်ကဲ့.....ကြားပါတယ်.....” နောက်ပစ်ထားတဲ့ လက်လေးနှစ်ဖက်ကို အသာလေးခါပြီး ဦးညွှတ်လို့အရိုအသေပေးလိုက်ပါတယ်.....ခေါင်းမငုံ့ လို့ မရဘူးလေ..... ကိုယ်စောင့်နတ်လဲ အရူးပဲလို့နှုတ်ခမ်းလှုပ်ရုံ ရေရွတ်လိုက်တာ သူတွေ့ လို့ မဖြစ်ဘူးလေ.... (ပြန်မပြောကြေးနော်)......။
ကဲ....လေးမ နဲ့ကိုယ်စောင့်နတ်..... ဘယ်သူ ရူးသလဲ..... နှစ်ယောက်လုံးပဲ ထင်တယ်နော်.....။ ။
“ ပုထုဇဉ်တိုင်းဟာ တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး ရူးကြတာချည်းပဲ” တဲ့...။
P.s.ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရူးနေကြတဲ့ အရူးတွေ အများကြီးရှိတဲ့အနက် ဒီအရူး ၅ မျိုးကို လေးမ စိတ်ကြိုက် စကာတင် ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်.....။
Posted by Layma at 7:06 PM6comments Links to this post
Labels: Analysis, Wondering
အလိုတော်….ဟိုကောင်မလေးတွေများ…. အကျီအကောင်းကို တမင်အပေါက် ဖောက်ဝတ်တော့ ကြည့်ကောင်းနေကြတယ်….ကျုပ်မှာ ဒီတစ်ထည်တည်းရှိလို့ပြဲစုတ်နေတာကြတော့ နှာခေါင်းရှုံ့သွားကြတယ် ….. အံ့ရော…. အံ့ရော…..။ ဘာလဲ…..ဟား….ဟား…. မနာလို ဖြစ်နေကြလား….ကျုပ်လို စိတ်ရှိတိုင်း ပြောခွင့်မရှိလို့လေ……ကျုပ်ကို အရူးတဲ့….ဟား….ဟား…..အရူးဆိုတာ နာမည်သာဆိုးတာ နင်တို့ လို….........။ ကျုပ်လွယ်အိတ်ထဲမှာ အစုံပါတယ်….ကျူပ်စိတ်နဲ့ 
တွေ့ တာလေးတွေဆို ကောက်ထည့်ထားလိုက်တာဘဲ….. စာရေးဆရာဆိုတဲ့လူကြီးတွေက ကျုပ်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့“အရူးလွယ်အိတ်” ဆိုလားဘာလား….ပြောသံကြားမိသေးတယ်…..။ ကျုပ်က စိတ်ပျော်ရင် ပါးစပ်ဆိုင်းတီးပြီး ကွေးနေအောင် ကလိုက်တာပဲ….. DJ မလိုဘူး .... KTV ဆိုင်သွားဖို့ မလိုဘူး….Club မှာ member ၀င်ဖို့ မလိုဘူး…..။ လောကကြီးမှာ ပိုက်ဆံဆိုတာကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်တာ ကျုပ်ပဲ…..။ ကျုပ်အတွက် ငွေဆိုတာ ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူး…..။ ဟော…. စားသောက်ဆိုင်က ကောင်လေး ကျုပ်ကို ထမင်းကျန် ဟင်းကျန်လေးတွေ လာပေးပြီ….( ဒါတောင် တချို့ ဆိုင်တွေက ၀က်စာပြန်ရောင်းရတာ ပိုက်ဆံရလို့ကျုပ်ကိုမကျွေးနိုင်ဘူးတဲ့….. ကျူပ်ကို မောင်းထုတ်ကြသေးတယ် ) ။ ရော့…ခွေးပိန်မ….စား….မင်းတ၀က်….ကျုပ်တ၀က်…..အညီအမျှဘဲနော်….လာမလုနဲ့ …. ကျုပ်က လူကောင်းတချို့ ထက် စိတ်ကောင်းရှိပါတယ်….အင်း….ဒါကြောင့် ကျုပ်ကို ဦးနှောက်မကောင်းတဲ့အရူးလို့ခေါ်ကြတာဖြစ်မယ်……။
ဂေါက်သီးတလုံးကို တုတ်တချောင်းနဲ့ကျင်းပေါက်ထဲကို မ၀င်ဝင်အောင် ရိုက်သွင်းနေကြတယ်…..။ တုတ်ကလဲ နံပါတ်အမျိုးမျိုးပါလား......ဒီကစားနည်းကြောင့် ဗိသုကာတွေခမျာ တော်တော်ဦးနှောက်စားကြရတယ်....။ ညီနေပြီးသားမြေကြီးကို ကုန်းတွေဖြစ်အောင် လုပ်ရတယ်.... ချိုင့်တွေလုပ်ရတယ်..... ရေကန်တွေတူးပေးရတယ်.... shape အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ သဲကျင်းတွေတူးပေးရတယ်..... သဲကျင်းတောင် ရိုးရိုးနဲ့ ရှယ် (deep) ဆိုပြီး ခွဲပြီး ထည့်ပေးရတယ်..... မြက်စိုက်တဲ့ လူတွေလဲ မသက်သာဘူး.....Green , fair-way , rough ဆိုပြီး သူ့ နေရာနဲ့ သူ ကွဲပြားအောင်စိုက်ပေးရတယ်.....။ လူဆိုတဲ့ လူတွေက လွယ်နေတာကို တော်တော်ခက်အောင် လုပ်တတ်ကြတာပဲ......။ ဂေါက်ရိုက်တဲ့ လူတွေကလဲ ဒီကစားနည်းကို တော်တော်လက်တွေ့ ကြတယ်......။ အိမ်က မိန်းမက တခုခုမှာလိုက်တာကိုသာ မေ့မယ်....။ ဘယ်ကျင်းမှာ ဘယ်သူက ဘယ်နှစ်ပတ် ပတ်လိုက်တာ...... ဘယ်နှစ်ချက် ရိုက်လိုက်တာ..... ဆိုတာတော့ ဘယ်အချိန်ကောက်မေးမေး အလွတ်ရတယ်......။ ရိုက်ရုံဘဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး..... လောင်းကြေးလေးက ပါသေး.....။ ဒီလိုနဲ့ ဘဲ ဂေါက်သီးလုံးတစ် လုံးကို ကျင်းပေါက်ထဲ မ၀င်ဝင်အောင် ကြိုးစားရင်း .... မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ်သွားကြတယ်.....။
P.s.အရူး (၄)…နှင့် (၅) ကို ယနေ့ (သို့ ) မနက်ဖြန်ဆက်ပါမည်....။
Posted by Layma at 3:41 PM4comments Links to this post
Posted by Layma at 8:45 PM9comments Links to this post
မထူးပါဘူး...တင်လက်စနဲ့“ရေးပေးပါ” စာအုပ်ထဲက အမှတ်တရတချို့ဆက်တင်လိုက်ပါတယ်....။ တဆောင်လုံးကို မရေးခိုင်းခဲ့မိတာ နောင်တရတယ်.....။ စာရွက်တွေ အများကြီးကျန်နေသေးတယ်....
တွေ့ ရင် ထပ်ရေးခိုင်းဦးမယ်.....။ လေးမ blog ကိုလာလည်တဲ့သူတွေရော ရေးသွားဦးမလား.... သူတို့ တွေ ရေးထားသလိုမျိုးလေ....။
Posted by Layma at 10:19 PM9comments Links to this post
Posted by Layma at 4:05 PM 10 comments Links to this post